2020 အွန်လိုင်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်ပါ။ သင်သိသင့်သည်များအားလုံး!
/ဘ‌‌လော့ခ်/tadalafil/သင်က Tadalafil အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို
အပေါ် Posted 03 / 06 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် tadalafil.
Tadalafil အမှုန့် (171596-29-5) သည်ဆေးညွန်းဆေးဖြစ်ပြီးဆေးပြားနှင့်တက်ဘလက်ကဲ့သို့သောပါးစပ်ပုံစံများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဤဆေးသည် Adcirca နှင့် Cialis ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးဖြင့်စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သည်။ tadalafil သည်လည်း၎င်း၏ယေဘူယျပုံစံဖြင့်တည်ရှိသည်။ သို့သော်၊ မူရင်းမူးယစ်ဆေး၏အားသာချက်အားလုံးအားနည်းခြင်းကြောင့်ယေဘူယျ tadalafil အမှုန့်ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကြံပေးခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ဤဆေးကို tadalafil ကဲ့သို့ ၀ ယ်သည့်အခါအလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ပိုကောင်းသောရလဒ်များအတွက်မှန်ကန်သော tadalafil ပုံစံကိုသင်ဝယ်ယူပါ။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Tadalafil အမှုန့်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်ကလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်.
တာဒလဖီးလ် (171596-29-5) အမျိုးမျိုးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအောက်တွင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Cialis သည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ခွန်အားမရှိခြင်းကိုယောက်ျားများတွင်များသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းအခြား tadalafil တံဆိပ်ဖြစ်သော Adcirca သည်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Adcirca သည်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါခံစားနေရသည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်လည်းအသုံးပြုသည်။
ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမခံစားရရန်ဤဆေးကိုသင်၏ဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ယူရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။ tadalafil အမှုန့်ကိုသင်အလွယ်တကူမည်မျှပင်ရောက်ရှိစေကာမူဆေးစစ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင်၏သူငယ်ချင်းအတွက်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုအရည်အသွေးကောင်းသည့်ရလဒ်များပေးနိုင်သည့်အလိုအလျောက်မဟုတ်ပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမတူကြဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာသင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့သောက်ဆေးကိုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။ တလွဲအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးပါက tadalafil သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤမူးယစ်ဆေးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေပြီး၎င်းသည်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Tadalafil ကိုများသောအားဖြင့်ယောက်ျားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်၊ သို့သော်သင်ကလိင်မှုနှိုးဆွသောအခါသင်သာသင့်ကိုကူညီသည်။ လိင်တံသည်သွေးနှင့်ပြည့်နှက်လာသောအခါ Penal Erection ဖြစ်ပေါ်သည်။ လိင်တံစာချုပ်မှသွေးထုတ်ယူရန်တာ ၀ န်ရှိသူများအနေဖြင့်သွေးဖြည့်တင်းပေးရန်နှင့်သွေးဖြည့်တင်းပေးရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည့်သွေးကြောများမှသွေးကြောများအပြီးဖြစ်ပေါ်သည်။ သင်၏လိင်တံတွင်သွေးစုဆောင်းမိသောအခါသွေးပေါင်တက်သည်။ tadalafil သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများသောအမျိုးသားအများစုအတွက်ခက်ခဲ။ ရေရှည်တည်တံ့သည့်စိုက်ထူနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုလေ့လာမှုများကပြသသည်။
Tadalafil ကို ၂၄ နာရီတိုင်းတစ်ကြိမ်သာသောက်သင့်သည်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်စိုက်ထူမှုများကိုမရရှိပါကထိုနေ့အတွင်း၌ပင်အခြားဆေးကိုထပ်မထည့်ပါနှင့်။ ပထမအကြိမ် tadalafil အသုံးပြုသူများသည်လိုချင်သောရလဒ်ရရန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းကိုတွေ့ကြုံရလေ့ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးအစတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့လူများသည်မူမိနစ် ၃၀ အတွင်း tadalafil အမှုန့်ရလဒ်များကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ သို့သော်ဆရာ ၀ န်များကပိုမိုမြင့်မားသောဆေးသောက်ရန်သို့မဟုတ်အခြားကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်မပြုလုပ်မီသင်ဆေးသောက်ရန်အရက်ကိုရှစ်ရက်ခန့်ယူရန်အကြံပြုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, tadalafil အမှုန့်ကိုညင်သာပျော့ပျောင်းသောဆီးကျိတ်ကင်ဆာလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်တွင်ဆီးလမ်းကြောင်းစီးဆင်းခြင်း၊ ဆီးစီးဆင်းခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သော BPH ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ ဤတွင် tadalafil သည်ချောမွေ့သောဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကြိတ်ကြွက်သားများကိုသက်သာစေသည်။ သို့သော်ဆေးစစ်ခြင်းမပြုမီသင် BPH ရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရပါက tadalafil အမှုန့်ကိုမဝယ်ပါနှင့်။ သတိရပါကမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကအမြဲတမ်းညွန်းထားသင့်သည်။
tadalafil အမှုန့်ကို pulmonary arterial hypertension (PAH) ရှိသူများကိုဆရာ ၀ န်ကညွှန်ကြားသည်။ သင်၏သွေးကြောများအတွင်းသို့သွေးကိုအဆုတ်သို့သယ်ဆောင်သည့်အခါမူးဝြေခင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအခြေအနေမှခံစားနေရသောလူများစွာသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သတင်းကောင်းမှာတာဒယ်ဖလစ်အမှုန့်သည် PAH လူနာများအားခန္ဓာကိုယ်၏အခြေအနေသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သူတို့၏အလုပ်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ကူညီရာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
Tadalafil သောက်သုံးမှုသည်အသုံးပြုရသည့်အကြောင်းအရင်းပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအားသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမည်သို့တုံ့ပြန်ပုံသည်သင့်သောက်သုံးသောပမာဏကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဆေးသောက်ခြင်းတိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်သင့်ဆရာဝန်ကနောက်ပိုင်းတွင်တိုးမြှင့်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောဆေးဖြင့်စတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အတွက်သင်၏ဆေးကိုအကြောင်းကြားခြင်းမပြုဘဲသောက်သုံးသောပမာဏကိုဘယ်တော့မျှမပြုပြင်ပါနှင့်။ Tadalafil အမှုန့်ဆေးညွှန်း အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏;
ဒီ tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသော Hard စိုက်ထူရတဲ့နှင့်ရေရှည်တည်တံ့အတွက်အခက်အခဲနှင့်အတူယောက်ျားသည်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အကြံပြုထားသည့်ကန ဦး သောက်သုံးမှုသည် ၁၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်မိနစ် ၃၀ အားလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနှုတ်ဖြင့်သောက်သင့်သည်။ ရလဒ်များကိုသင်မကြုံတွေ့ပါကသင်၏ပုံမှန်သောက်သုံးမှုကိုရှစ်ရက်အထိဆက်လုပ်သင့်ပြီးဆေးကိုချိန်ညှိရန်သင့်ဆရာဝန်ထံသွားပါ။ အချို့လူများသည်အထူးသဖြင့် tadalafil အသုံးပြုသူများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရလဒ်များရရန်နှောင့်နှေးကြသည်။ သို့သော်တစ်နေ့လျှင် 10mg အထိသောက်နိုင်ပါသည်။ tadalafil အမှုန့်ဆေးပမာဏကို ၅ မှ ၂၀ မီလီဂရမ်မှလိုအပ်သည့်အတိုင်း၊ လိင်မှုကိစ္စမပြုမီတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်သင့်သည်။ ED သောက်သုံးမှုအတွက် Tadalafil သည်တစ် ဦး ချင်းစီသည်းခံနိုင်မှုနှင့်ထိရောက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ တစ်နေ့လျှင် 30mgs နိမ့်ဆုံးသောက်သုံးပြီးနောက်၌ပင်အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရသောသုံးစွဲသူများအတွက်ထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။
သင်တစ်နေ့လျှင် tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးမှုနှင့် အကယ်၍ ရလဒ်မရရှိပါက ၂၄ နာရီအတွင်းအခြားသောက်သုံးသောဆေးကိုမသောက်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။ Tadalafil အမှုန့်ရလဒ်များသည်အသုံးပြုသူများကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်တစ်နေ့တည်းတွင်အပိုဆေးထိုးသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပထမအကြိမ် tadalafil အမှုန့်များအသုံးပြုသူများသည်နှောင့်နှေးမှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်သော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလိုအပ်သောစိုက်ထူမှုများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
tadalafil အမှုန့်သလောက်အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ် overdosed လျှင်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖော်ထုတ်နိုင်, ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကုသတစ်ဦးချင်းစီကူညီပေးနေထားပြီးတဲ့အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ၏အများစု tadalafil အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကမည်သို့တုံ့ပြန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အချို့သောလူများသည်မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောသောက်ဆေးသောက်ပြီးနောက်၌ပင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ အချို့အသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများထက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းပါးနိုင်သည်။ tadalafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့သည်အချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပြီး၎င်းတို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျအခမဲ့များမှာ အမြောက်အများအတွက် tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ် သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် မူတည်၍ တစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အသုံးပြုရန်အတွက်လုံလောက်ပါသည်။ Tadalafil အမှုန့်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများစွာသည်ယနေ့တွင်စျေးကွက်တွင်နေရာချထားသော်လည်း၊ ၎င်းကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူထံမှရရှိရန်သေချာစေပါ။ သင်စျေးကွက်တွင်တွေ့ရသောရောင်းသူအားလုံးအရည်အသွေးကောင်းသည့်ဆေးဝါးများမရှိကြပါ။ ပိုကောင်းမြန်ဆန်တဲ့ရလဒ်တွေအတွက်သတိရပါ၊ အရည်အသွေးကောင်းသည့် tadalafil အမှုန့်ကိုသင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သည်။ tadalafil အမှုန့်၏ယေဘူယျပုံစံလည်းရှိပါသည်။ ၎င်းမှာအရည်အသွေးအချို့မရှိခြင်းနှင့်သင်၏အခြေအနေကိုကုသရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်, နှင့်နောက်ကျောအချို့ရက်ပေါင်းမတူဘဲသင်သည်တတ်နိုင် tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအွန်လိုင်းနှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ သို့မဟုတ်လက်တော့တစ်လုံးတို့ဖြင့် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင့်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးခန်း၏သက်တောင့်သက်သာဖြင့်မှာယူနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ဒေသဆေးဆိုင်မှ tadalafil အမှုန့်ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအကောင်းဆုံး tadalafil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အလွန်သတိထားရန်အမြဲတမ်းအကြံပေးသည်။ အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းသူများသည်အရည်အသွေးနိမ့်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးရလဒ်ကောင်းများကိုရရှိရန်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။
ဤဆေးနှစ်မျိုးသည် phosphodiesterase-5 (PDE5) နှင့်၎င်းသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ tadalafil အမှုန့်နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်များသည်များစွာသောတူညီချက်များဖြစ်ပြီး၊ ယောက်ျားများတွင်အားစိုက်ခြင်းနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ သုံးစွဲသူနှိုးလာသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးသည်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သင်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါက tadalafil နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်များသည်သင့်အားခိုင်မြဲပြီးကြာရှည်စွာစိုက်ထုတ်နိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အရ tadalafil အမှုန့်သည်သင်၏ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၁၆ မှ ၄၅ မိနစ်အတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ sildenafil သည်ရလဒ်များကိုမိနစ် ၃၀ အတွင်းပေးသည်၊ သင်အဆီမြင့်သောအစာကိုစားလျှင်၎င်းသည်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန် sildenafil citrate အမှုန့်ကိုအစာအိမ်အချည်းနှီးဖြင့်သောက်သင့်သည်။ အားလုံးနီးပါး PDE16 inhibitors ၏ထိရောက်မှုသည်တူညီသည်။ သို့သော် Sildenafil ၏ထိရောက်မှုသည် ၈၄% နှင့် tadalafil ၈၁% တွင်ရှိနေသော်လည်းအမျိုးသားများသည် tadalafil အမှုန့်များကိုပိုမိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
Tadalafil အမှုန့်ကိုလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ်သောက်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် tadalafil ၏နေ့စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏသည်လိုအပ်သောဆေးပမာဏထက်သေးငယ်သည်။ ဥပမာ 10mgs သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ tadalafil သောက်သုံးသောပမာဏဖြစ်သည်။ ဆေးသောက်ပြီးသည်နှင့် ၃၆ နာရီခန့်ကြာသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်းမခံနိုင်သောအခါသင်၏ဆရာဝန်သည်ဆေးညွှန်းကို 36mg အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ် 20mg အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ နေ့စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏအတွက်အကြံပြုထားသည့် tadalafil အမှုန့်ဆေးပမာဏမှာ ED အတွက် 5mg ဖြစ်ပြီး BPH ကိုကုသရာတွင် 2.5mg ဖြစ်သည်။ ဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်ဆရာ ၀ န်၏အကြံပြုချက်မပါဘဲသုံးစွဲသူများသည် tadalafil သောက်သုံးသောပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုရန်လည်းအကြံပေးသည်။
Sildenafil citrate အမှုန့်ကိုသင်လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီတစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီနှင့်တစ်နာရီသောက်သင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလိုအပ်ချက်အရသောက်သင့်သည်။ အကြံပြုထားသည့်ဆေးမှာ ၅၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်မလိင်ဆက်ဆံမီမိနစ် ၃၀ သို့မဟုတ်လေးနာရီကြာနိုင်သည်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် 50mg ဆေးသောက်သုံးမှုသည်လိုချင်သောရလဒ်များကိုမပေးနိုင်လျှင် sildenafil citrate အမှုန့်ပမာဏကို 30mgs အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်းမခံနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရပါကသင်၏ဆရာဝန်သည်ဆေးသောက်ခြင်းကို 100mg အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ tadalafil နည်းတူ sildenafil citrate အမှုန့်ကို ၄ နာရီအတွင်းသင်ရရှိနိုင်သည့်တိုင်အောင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်သင့်သည်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးဝါး, overdosed သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားအခါ, ထိုကဲ့သို့သောဖလပ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ရင်အဖြစ်နီးပါးဆင်တူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အရောင်အမြင်ကပို sildenafil citrate အမှုန့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သတငျးကောငျးကိုသင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာလျှင်အားလုံးနှစ်ခုမူးယစ်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အခမဲ့ခံစားရ tadalafil အမှုန့် နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, အေ, Koka, S. , Ockaili, RA, & Xi, L. (2011) ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင် phosphodiesterase-5 inhibitors အသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ စမ်းသပ် & လက်တွေ့နှလုံးရောဂါ, 16(4), e30 ။
Mostafa, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013) ။ ဆီးချိုကြွက်များတွင် penile cavernous တစ်ရှူးများအပေါ်နာတာရှည်ထိုးဆေးပမာဏနည်းသော tadalafil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Urology, 81(6), 1253-1260 ။
Kaya, B. , keerkez, C, Işılgan, SE, Göktürk, H. , Yığman, Z. , Serel, S. , … & Ergün, H. (2015) ။ ကြွက်များတွင်အရေပြားခတ်ရှင်သန်မှုအပေါ်စနစ်တကျ sildenafil, tadalafil နှင့် vardenafil ကုသမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုနှင့်လက်ခွဲစိတ်ကုသ၏ဂျာနယ်, 49(6), 358-362 ။
Porst, အိပ်ချ်, Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, အေ, & Viktrup, အယ်လ် (2013) ။ နှစ် ဦး စလုံးအခြေအနေများနှင့်အတူလိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက်ညင်သာပျော့ပျောင်းသောဆီးကြိတ် hyperplasia နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်အလယ်တန်းအောက်ပိုင်းဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် tadalafil ၏ဆိုးကျိုးများ: ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled tadalafil လက်တွေ့လေ့လာမှုများကနေစုဆောင်းအချက်အလက်များ၏လေ့လာဆန်းစစ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်, 10(8), 2044-2052 ။
19988 Views စာ
Cardarine ၏စူပါ Cardarine ကဘာလဲ? / 8 အကျိုးကျေးဇူးများ methenolone enanthate အမှုန့်အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?